I-Raw Cetilistat (i-Oblean) powder (282526-98-1) hplc = 98% | I-AASraw
/ Imikhiqizo / I-Fat Loss powder / I-Cetilistat (Oblean) powder
Isilinganiselwa: SKU: 282526-98-1. Isigaba: I-Fat Loss powder
I-AASraw inokukwazi ukuqala nokukwazi ukukhiqiza kusuka kugremu kuya kwe-mass order ye-Cetilistat (Oblean) powder (282526-98-1), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
I-Cetilistat (i-Oblean) i-powder video
I-Cetilistat (i-Oblean) i-powder eyisisekelo Abalingiswa
Igama: I-Cetilistat (i-Oblean) powder
Ifomula Yamamolekhula: C25H39NO3
Isisindo Yamamolekhula: 316.31
I-Melt Point: I-190-200 ° C
Umbala: Powder Grey
Umjikelezo we-Cetilistat (Oblean) we-powder
Amagama Amakhemikhali: I-Cetilistat powder
Amagama Ebizo: I-powder oblean
Ukusetshenziswa kwe-Cetilistat (Oblean) powder
I-Cetilistat (i-Oblean) powder iyisimiso se-pancreatic lipase, i-enzyme ephula i-triglycerides emathunjini. Ngaphandle kwalokhu ku-enzyme, i-triglycerides kusukela ekudleni ivinjelwa ekubeni i-hydrolyzed ibe yi-fatty acids free acids futhi ishiywe ukuba ixakwe ngaphandle kwe-ungested. Lesi sidakamizwa, ngenkathi sifana nesiphuzo se-druglist se-FDA esamukelwe njengamanje, singase sibe nesiprofayili se-side effect esebekezelekile ngenxa yesakhiwo esithile se-molecular. Isigaba se-2 sihlolisise i-612 obese, izifundo zesifo sikashukela nge-BMI ye-28 kuya ku-45 kg / m2 esikhathini sokunakekelwa kweviki le-12. I-Cetilistat powder i-80 ne-120 mg ikhuthaza ukulahlekelwa kwesisindo esibalulekile uma kuqhathaniswa ne-placebo (3.85 kg no-4.32 kg vs. 2.86 kg, ngokulandelana). Ukulahleka kwesisindo esiphundu se-powder okwenziwe i-oblean kwakufana nokulahlekelwa kwesisindo kufinyelelwe nge-orlistat powder (3.78 kg). I-Cetilistat powder yayibekezelele kahle futhi yabonisa ukuyeka okuncane ngenxa yezenzakalo ezimbi kunamaqembu we-placebo namaqembu we-orlistat powder. Njengoba kunqunywe ukuthi iqembu le-orlistat le-powder lalibi nakakhulu kunalokhu ku-120 mg i-powder oblean namaqembu we-placebo, futhi kwakungenxa yokuvulwa kwamathumba, i-Cetilistat powder ingaba i-lipase inhibitor ekhethiwe yokufeza isisindo. Izivivinyo ze-Phase 3 ze-Oblean powder okwamanje ziyaqhubeka eJapane.
Iyiphi isilinganiso se-powder Oblean
Isilinganiso se-oblean powder sinikezwa njengama-capsules we-60mg amandla wokuphatha ngomlomo. Umuthi uthathwa ngokudla ukuqinisekisa ukuthi ungasebenza ngenkathi ukudla kugawulwa, ukuze ukumunca kwamafutha okudla kunganciphise kahle. Udokotela wakho uzokutshela ukuthi imithi engakanani okumelwe uthathe ngomthamo ngamunye, njengama-wellas imithi edingekayo yansuku zonke. Kubalulekile ukuthi unamathele kule miyalo. Ungathathi okungaphezu kwalokho udokotela wakho akutshela ukuthi uthathe.
I-Cetilistat powder iyi-powder yokulahlekelwa isisindo esetshenziswa ngokuhambisana nokudla okuphansi kwekhalori. Isebenza ngokuvimbela inani elikhulu lamafutha kusukela ekugayweni futhi kufakwe emzimbeni. Leli poda yokulahlekelwa isisindo ihlukaniswa njenge-lipase inhibitor futhi isebenza ngokuqondile ohlelweni lokugaya ukudla lapho livimbela isenzo se-lipolytic enzyme okuthiwa i-lipase. Lezi i-lipases yilokho umzimba owusebenzisa ukugaya amafutha. Kodwa-ke, uma lo muthi uphathwa eceleni kokudla, ubophezela ku-lipases, ngaleyo ndlela ubavimbela ekuphuleni amanoni. Amafutha angenayo i-hydrolyzed esikhundleni salolu hlobo oluthile, okwenza kube nokwanda kwamafutha e-fecal nokunciphisa amafutha. Uma isetshenziselwa ukudla okunomsoco we-calorie, kungasiza ukuthuthukisa ukulahlekelwa kwesisindo futhi kwenze kube lula ngeziguli ezingaphezu kokukhululeka ukubuyela emuva, ngaleyo ndlela kukhulise amathuba okulahleka kwesisindo. Indlela yokusebenzisa ifana ne-orlistat yakudala ye-powder ngokuvimbela i-lipase ye-pancreatic.
Akunconywa ukuthi uthathe amathisense angaphezulu kwe-3 phakathi kwamahora we-24.
Masinyane uye emnyangweni ophuthumayo oseduze nawe uma uthola ukubhekana nokugula. Izimpawu ezivame ukuhambisana nokuphendula okunjalo zihlanganisa ukucindezeleka ukuphefumula noma ukugwinya, ukuqina kwesifuba, ukuvuvukala, ukukhwabanisa isikhumba, kanye nezinyosi.
I-Cetislim ayifaneleki njalo kuzo zonke iziguli. Njalo thintana nomhlinzeki wakho wokunakekelwa kwezempilo ngaphambi kokusebenzisa le mithi uma ukhulelwe, ukuncelisa, ukuzama ukukhulelwa, ukusebenzisa noma imiphi imithi (imithi noma imithi engekho imithi), usebenzisa noma yimaphi imikhiqizo noma imithi yokufakelwa kwemithi, noma uma unomsoco noma enye impilo izinkinga.
Isilinganiso esifanele se-Oblean powder kanye nemithi yesigqebhezana ngokuvamile kuxhomeke esigulini kanye nesimo esiphathwayo. Ungalungisi umthamo wakho ngaphandle kwemvume yomhlinzeki wakho wezempilo. Lo mkhiqizo usebenzise kuphela njengoba kunqunywe futhi ufundiswe.
I-Cetilistat Raw Powder
Ingabe i-Cetilistat (i-Oblean) i-powder inayo yonke imiphumela emibi
Iziguli ezithola ukwelashwa ngokukhuluphala ne-Cetislim powder zingabhekana nemiphumela emibi. Kumele utshele udokotela wakho uma lokhu kwenzeka. Ezinye izibonelo zinikwe lapha:
Nakuba ukubhekwa okuncane kubhekwa njengokujwayelekile, izenzakalo ezimbi ezinzima zingase zenzeke. Xhumana nodokotela wakho ngokushesha uma lokhu kwenzeka.
Indlela yokuthenga i-powder oblean: Thenga i-Cetilistat powder kusuka ku-AASraw